प्रेमिका बिरामी भएपछि नायक पल शाह आत्तिएर दौडिँदै अस्पताल पुगे, आखिर के भयो गरिमालाई ? पलले समेच रुन्चे अनुहार लगाउँदै गरिमाले भेटे, कहिले डिस्चार्ज हुन्छिन् गरिमा ? – Dailny NpNews
प्रेमिका बिरामी भएपछि नायक पल शाह आत्तिएर दौडिँदै अस्पताल पुगे, आखिर के भयो गरिमालाई ? पलले समेच रुन्चे अनुहार लगाउँदै गरिमाले भेटे, कहिले डिस्चार्ज हुन्छिन् गरिमा ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र २२, २०७७ समय: २१:५९:३१
गायिका बेनिशा पौडेल, गायक सुरेश लामा, रचना सरोज ओली को “पर्दैन पर्दैन मलाई फकाउन” वोलको गित सार्वजनिक भएको छ । गीतमा नायक पल शाह र मोडेल गरिमा शर्माले वैवाहिक जीवन प्रवेशसंगै कोरोनाले पारेको असरबारे देखाईएको छ। बिहेपछि गरिमालाई कोरोना संक्रमण देखिदा पतिको रूपमा पलले कसरी बिपत्तिको सामना गरे, गीतमा नाटकीय रूपमा प्रस्तुत गरीएको छ।
संगीत दीपक शर्माको रहेको यो गीतको कंसेप्ट र कोरियोग्राफ़ी सुनील क्षेत्रीले गरेका छन भने निर्देशन सरोज ओलीको रहेको छ। करोडौंले हरेको गीत गाएकी यति राम्री गायिका रुदै मिडियामा । ‘गीत गाउन दिन्छु भनेर यस्तो गरे’ भन्दै भक्कानिईन् भिडियो हेर्नुस
निकै नैसुमधुर स्वरकी धनी बेनिषा पौडेल दुख पोख्दै मिडियामा आईन् । बिगत २ बर्षदेखि सँगीत क्षेत्रमा रहेकी बेनिषा सँगीत क्षेत्रमा सोचे जस्तो सफलता नपाउँदा धेरै दुखी छिन् ।
साथै परिवारको तनाव ठुलो छ । सानै उमेरदेखि परिवारको उतार चढाव देखेकी बेनिषाले नयाँ नयाँ न्युज नेपालका शिशिर भण्डारीसँग कुरा गर्दै भित्री पिडा पोखिन् । बेनिषाले आफ्नो परिवारलाई ऋण लागेर बैकले घर नै लिलाम गरेकोबताईन् । साथै आफुलाई धेरैले गीत दिन्छु भन्दै झुलाएको बताउँदै बेनिषा धुरुधुरु रोईन् । भिडियो हेर्नुहोस्